AmaTundras asebenza njengama-amplifiers wokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - NASA / JPL-Caltech / Charles Miller
Ukukhishwa okuphezulu kwekhabhoni dayoksayidi kubangela izinkinga eziningi esintwini, njengoba ziqinisa umthelela wokubamba ukushisa. Ngenxa yalokho, amazinga okushisa ayenyuka futhi izingongolo ziyancibilika, okungabeka impilo yabantu engozini.
Enye yezindawo ezifundwayo yi-Alaska, ikakhulukazi itundra. Ukusuka ngonyaka we-1975 kuze kube manje inani le-CO2 ekhishiwe ngenxa yokuncibilika lenyuke ngo-70%, njengoba kubikiwe yiNational Aeronautics and Space Administration, eyaziwa ngesifinyezo sayo esiNgisini iNASA.
Ucwaningo, oluholwa ngumcwaningi womkhathi waseHarvard University uRoisin Commane, lukuveza lokho amazinga okushisa afudumele nokushisa kweqhwa kungakhuphula ukukhishwa kwe-carbon dioxide kuma-tundras, ngokungangabazeki okuyobhebhethekisa ukufudumala kwembulunga yonke, njengoba inhlabathi engaphezulu kwamazinga angama-60 ebangeni elisenyakatho inenqwaba yekhabhoni ngendlela yezinto eziphilayo ezivela ezimileni ezifile.
UComanne ukuchaze lokho Ngesikhathi sasehlobo se-arctic, ukuncibilika kwenhlabathi kanye namagciwane kudiliza le nto ephilayo, kukhiqize inani elikhulu le-CO2. Yize ngo-Okthoba inhlabathi iba yiqhwa futhi, ukukhishwa okuqinile kwale nhlanganisela kuyaqhubeka kuze kube yilapho umhlaba ubanda ngokuphelele.
Ngenxa yalokho, isimo sezulu siya sifudumala okuholele ekutheni i-tundra ithathe izinyanga ezifika kwezintathu ukubuyisaLapho esikhathini esedlule kwakuthatha kuphela inyanga. Ngaphezu kwalokho, imininingwane etholakale emibhoshongweni yokubuka ibonisa ukwanda okuqhubekayo kwe-carbon dioxide, okwenza amazinga okushisa ekwindla nasebusika abe mancane.
Ngakho-ke, inhlabathi ye-tundra isebenza njengesikhulisi sokushintsha kwesimo sezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » AmaTundras asebenza njengama-amplifiers wokushintsha kwesimo sezulu
Isixazululo sokushintsha kwesimo sezulu asidlulanga ngokuthuthela eMars